Fizahan-tany any Failandy | Vaovao momba ny dia
Fizahan-tany any Failandy
Mariela Carril | | Failandy, Inona no ho hita
Nandritra ny fotoana lava dia sarotra ny fandrosoana ho an'ireo firenena any avaratr'i Eropa, saingy hatramin'ny nifaranan'ny Ady faharoa dia tsy nisy afaka nandà fa nitombo izy ireo ary nanjary lasa fiaraha-monina demokratika sy zon'ny mpamorona zon'olombelona eran'izao tontolo izao. Iray amin'ireo firenena ireo Failandy.
Raha izany dia nitranga tamin'ny taonjato faharoa-polo dia tokony holazaina fa nandritra ny kely izay nandehananay tamin'ny taonjato fahiraika amby roapolo dia lasa toerana fitsangatsanganana tena manintona sy malaza. Ny boky, ny sarimihetsika ary ny andian-tantara amin'ny fahitalavitra dia nandray anjara tamin'io laza mitombo io, ka anjaranao izao no mahita inona no hatao any finland.
Podemos zarao faritra efatra ny firenena ary avy eo manapa-kevitra raha te handalo izy rehetra sa ny ampahany amin'izy ireo. Ireto faritra ireto dia: Helsinki, faritry ny farihy, Lapland ary ny morontsiraka. Mazava ho azy fa hanomboka amin'ny Helsinki, renivohi-pirenena.
Io koa ilay tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena ary mponina 1.4 tapitrisa no misy azy. Tsara avaratr'i Eropa izy io ary archipelago misy nosy 300 eo ho eo samy hafa habe izay azo tratrarina amin'ny fiaramanidina na sambo, toy ny any amin'ny Ranomasina Baltika. Manomboka eto dia azonao atao ny manomana fitsangatsanganana kely hafa manodidina an'i Failandy, na amin'ny tanàna kely kokoa na amin'ny tanàna kely na amin'ny valan-javaboary.
Tena mahomby ny rafitry ny fitaterana eto an-tanàna ary afaka mividy tapakila isan'andro ianao izay mandrakotra ny dianao amin'ny alàlan'ny metro, bus ary ny tram, na dia ny fampiasana ny ferry aza. Avy amin'ny seranam-piaramanidina mankany afovoan-tanàna dia tsy misy afa-tsy antsasak'adiny ary afaka manao izany koa ianaosarety bisikileta, mavo, na makà sambo hankany amin'ireo nosy kely. Avy eo, Inona no azontsika tsidihina ao Helsinki? Ny fiangonany, toa ny Katedraly Helsinki, la Katedraly Uspenski, la Fiangonana Temppeliaukio na ny Kampi Chapel of Silence.
Amin'ny tenim-pirenena hafa tranombakoka dia ny Kiasma ny kanto ankehitriny sy ny maritrano, ny HAM (Museum of Art), ny Museum momba ny famolavolana sy ny National Museum of Finland. Azonao atao ny manampy ny fitsidihana ny Trano Opera ary raha tsara vintana ianao mandray anjara amin'ny iray amin'ireo festival izay voalamina eo an-toerana, toy ny fetin'ny ririnina na jazz. Raha momba ny fanaovana fiantsenana dia ny Distrikan'i Toriureau manokana misy fivarotam-boky, trano antitra ary kojakoja ao an-trano.
Raha mandeha amin'ny lohataona na fahavaratra ianao rehefa tena tsara kokoa ny andro dia ny mandeha, misakafo ary mandehandeha amin'ny masoandro no tokony hataonao. Betsaka ny toerana amoron-tsiraka ary nosy tsara tarehy, ohatra Lonna, Vallisaari na Suomenlinna izay World Heritage Site. Miala amin'ny Kianjan'ny tsena ny sambo ary maharitra 10-20 minitra fotsiny. Ary amin'ny maha-zavatra niainanao tamin'ny alina, inona no hevitrao momba a sauna ho an'ny daholobe an'ireo izay tara misokatra?
Ery ambony no nilazanay izany avy any Helsinki dia afaka manao dia kely ianao ary ny marina dia tsy tokony hiala amin'ny sasany tanàna ambanivohitra valo ihany Vohitra tamin'ny taonjato faha-XNUMX amin'ny morontsiraka atsimo andrefana, manan-karena amin'ny tantara, ankehitriny onenan'ireo mpanao asa tanana: Fiskars, Strömfors, Billnäs, Mathildedal, Teijo, Leineperi, Verlay ary ny faritra indostrialy any Noormarkku.
Faritra faharoa amin'ny firenena mankany fitsidihana no faritry ny farihy. Manana farihy 188.000 arivo sy nosy 180 arivo i Finlandy ary maro no eto, amin'ity faritra ity izay lehibe indrindra any Eropa: renirano, lakandrano, farihy, farihy, nosy. Safidy iray ny manakarama fonosana avy amin'ny maso ivoho fizahan-tany, ny iray hafa dia ny manofa fiara ary manararaotra ny fisian'ny lalana malalaka any Failandy.
Afaka misafidy ianao amin'ny ankapobeny karazana dia efatra amin'ny faritry ny farihy. Ny làlana dia nofaritan'ny maso ivoho ihany, ka ho hitanao fa samy manolotra anao kely ihany izy rehetra any amin'ny tanàna rehetra. Misy làlana ho an'ireo tia kolontsaina, Ireo tia kolontsaina, miaraka amin'ny 1300 kilometatra hamakivakiana ny faritr'i Kouvola, Mikkeli, Savonlinna ary ny hafa ary mamakivaky ireo toerana antenantenany toa ny Castle Olavinlinna.
Ity zotra ity dia tokony hatao amin'ny alàlan'ny fiara na bisikileta, na dia azo atao aza ny fitateram-bahoaka. Làlana iray hafa ny Sauna Lovers, iray hafa ny Làlan'ny fianakaviana satria misy zaridaina fialamboly, toby, hotely family friendly, zoo ary fitsangatsanganana an-tsehatra. Ary farany misy ny làlana ho an'ireo tia voajanahary izay misy ny fitsangantsanganana, ny jono, ny lakana, ny valan-javaboary, ny bisikileta an-tendrombohitra, ary na ny matory amin'ny toeram-piompiana aza.
Tianao ve ny mitaingina bisikileta matetika aminao ary mieritreritra an'izany ve ianao a fitsidihana bisikileta mahafinaritra izany? Avy eo ianao dia afaka manao ny Lalan'i Turku Archipelago, zotra boribory izay be mpitia indrindra amin'ireo mpizahatany, indrindra amin'ny fahavaratra, manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Septambra. Misy bisikileta, fiara ary moto ary mihoatra ny làlana tokana dia tambajotram-pifandraisana izay misy fiampitana sambo. Ho 200 kilometatra mahery fotsiny.
Tonga tao izahay avy eo Laponie, tany majika, tanin'ny masoandro any an-danitra mandritra ny 24 ora sy ny tsara tarehy Jiro Avaratra. Amin'ny ririnina dia tany fotsy izy io, miaraka amina fitsangatsanganana alika na vanim-potoana fanaovana ski manomboka amin'ny volana oktobra. Amin'ny fararano dia mihodina ocher sy mena ny ravina rehetra, antsoina hoe "ruska" io, ary vanim-potoana mahafinaritra io, amin'ny tapaky ny volana septambra, hijerena azy.
Any Lapland azonao atao fitsangantsanganana, rafting, fitsidihana ireo valan-javaboary, kayak, fihaonana amin'ny Sàmi, ny olona tany am-boalohany Lapland, Suède ary Norvezy, ary mivoaka ny fisotroana any Rovaniemi, renivohitry ny Finlanda Lapland ary malaza any an-tranon'i Dadabe Noely.
Ary farany, ao ny faritra amoron-tsirak'i Failandy, izay iposahan'ny masoandro matetika. Ireto misy maro tanàna tsara tarehymahafinaritra miaraka amin'ny trano hazo mbola mijoro: Turku, Naantali, Louhisaari, Hiuntie, Lyökintie, Rauma, Vuojoki, Laitakari, Reposaari. Ny zavatra tsara tokony hatao dia ny manofa fiara ary mitety azy ireo irery.
Araka ny hitanao, Finlandia dia toerana tsara haleha nefa tsy maintsy mandahatra programa izay hataonao ianao ary miankina amin'ny fotoana amin'ny taona amin'ny dianao izany. Mahafinaritra ny ririnina fa mametra ny hetsikareo. Mino aho fa ny fahavaratra no tsara indrindra satria afaka mankafy andro lava sy fitsangatsanganana mahafinaritra any amin'ny afovoan-firenena ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Failandy » Fizahan-tany any Failandy
Inona no ho hita any Archena, Murcia
Inona no ho hita any Burano